उद्योग विशेष अल्ट्रासोनिक समाधान - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
हेल्सेचर अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू धेरै उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तै अक्षय ईंन्धनहरू & बायोमास, खाना & पेय, प्यान्ट & मसी, कोटिंग्स, तार र केबल, वा रासायनिक प्रसोधन।
अल्गा विकास र निष्कर्षण
Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणों लगातार अल्गा रिएक्टरहरुमा लागू गरिन्छ पारदर्शी सतहबाट अल्गा फिलिम हटाउनुहोस्। अल्गा विकास र मोटाई पछि, अल्ट्रासोनिक cavitation को लागि प्रयोग गरिन्छ अल्गा तेलको निकासी र अन्य बहुमूल्य यौगिकहरू।
Biodiesel एक अक्षय ईंधन हो – पेट्रोलियम बाट बने डीजल ईन्धनको एक विकल्प। Biodiesel स्रोतहरु बाट ट्रांजिस्टरेशन द्वारा बनाइन्छ, जस्तै सब्जी को तेल, अल्गा तेल, पशु बोसो वा तेल। बायोडिडेलको निर्माणमा अल्कोहलका साथ उत्प्रेरक प्रतिक्रिया समावेश छ। तेल को अल्ट्रासोनिक मिश्रण, रक्सी संग वसा या तेल प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को गति मा सुधार र काफी उपज। यसले लगानी र परिचालन लागत घटाउँछ।
अल्ट्रासोनिक ट्रास्जिस्टरिकरणको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
रसायन शास्त्र / ध्वनि विज्ञान
सोनकोम्याटिक्स अल्ट्रासाउन्डको रासायनिक प्रतिक्रिया र प्रक्रियाको आवेदन हो। तरकारीमा सोनोकेमिकल प्रभावहरू हुन सक्ने तंत्रमा ध्वनिक cavitation को घटना हो। रासायनिक प्रतिक्रियाहरु र प्रक्रियाहरुमा सोनोकोमिकल प्रभाव प्रतिक्रिया गति र / या आउटपुट, अधिक कुशल ऊर्जा को उपयोग, चरण हस्तांतरण उत्प्रेरक को प्रदर्शन को सुधार, धातुहरु र ठोस को सक्रियता या अभिकर्ता या उत्प्रेरक को रिएक्टिविटी मा वृद्धि मा वृद्धि मा शामिल हो।
Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु मा प्रयोग गरिन्छ nanomaterials को संश्लेषण साथै पनि नैनो सामाग्री सहित यौगिकों र कम्पोजिट को गठन। यसमा प्रयोगको समावेश छ अल्ट्रासोनिक्स वर्षाको समयमा र नानो-आकारको सामग्रीको डैगलगोमेसन, जस्तै धातु अक्साइड वा कार्बन नैनोट्यूब।
Nanomaterials उद्योग मा अल्ट्रासोनिक्स को उपयोग को बारे मा अधिक पढ्न को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस!
Inkjet मसी मा pigments को फैलावट र आकार को कमी र मुद्रण मसी मा Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणों को एक विशिष्ट अनुप्रयोग हो। अल्ट्रासोनिक cavitation एकल-फैलिएको कणहरूलाई माइक्रो-साइज र नानो-आकारको सामग्री मेगलगोम गर्दछ।
मसीको ढाँचामा अल्ट्रासोनिक्स को प्रयोगको बारेमा अधिक पढ्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासाउन्डको लागि पेंट र कोटिंग्स को रूप मा प्रयोग गरिन्छ:
आकारको कमी nanomaterials
प्यान्ट र कोटिंग्सको उत्पादनमा अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूको बारेमा थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक सफाई निरंतर सामग्री को सफाई को लागि पर्यावरण अनुकूल विकल्प हो, जस्तै तार र केबल, टेप या ट्यूब। अल्ट्रासोनिक पावर द्वारा उत्पन्न गरिएको cavitation को प्रभाव स्नेहन अवशोषण हटाउँदछ जस्तै तेल वा तेल, साबुन, ढोका वा धूल।
तेल & ग्याँस र नवीकरणीय ईंन्धन
हेल्सेचर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू खनिज र अक्षययोग्य ईंन्धनहरूको अल्ट्रासोनिकेशनका लागि ईन्धन अनुसन्धान सुविधाहरू र प्रसोधन संयंत्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यो अनुप्रयोगहरू समावेश छन् NOx-कमी, the तेल को desulfurization & डीजल, biodiesel manufacturing, पछाडि विघटन र इथेनॉल उत्पादन।
जीवाश्म र नवीकरणीय ईंधनहरूको लागि अल्ट्रासोनिक्स क्षमताको खोज गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
खाद्य उद्योगमा अल्ट्रासोनिक्सको प्रयोग सीमित छैन कक्षहरूको विच्छेद, the एंजाइमहरूको निष्क्रियता र विच्छेदन र उत्तेजना खाद्य सामाग्री र additives को। Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु मा पनि प्रयोग गरिन्छ सोडा बोतलों र डिब्बे को लीक परीक्षण साथै पनि तरल पदार्थहरू, चकलेट जस्तै। अल्ट्रासोनिकेशन तरल भोजन र पेय पदार्थ को लागि परम्परागत ताप-उपचार को लागि एक गैर थर्मल विकल्प हो, जस्तै सस, प्रिय वा दूध।
खाद्य उद्योगमा अल्ट्रासोनिक्स प्रयोगको बारेमा थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
नयाँ कस्मेटिक उत्पादनको ढाँचामा धेरै प्रोसेसिंग चुनौतीहरू समावेश गर्दछ, जस्तै कक्षहरूको विच्छेद र ठोस, वा फैलिएको छ र पाउडर को तरल पदार्थ मा भंग गर्न। त्यस्ता प्रक्रियाहरूको लागि, साथै स्थिर पायसको उत्पादन, Degassing र Homogenizing हेलस्लेचरले प्रयोगशाला अनुसन्धान र औद्योगिक उत्पादनको प्रयोगको लागि अल्ट्रासोनिक मिक्सिङ उपकरण प्रदान गर्दछ।
कस्मेटिक उद्योगमा अल्ट्रासोनिक्सको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!